Prime Hook National Wildlife Refuge To Swinging Ladder Dredge
I-Ellicott 460SL Swinging Ladder dredge izosetshenziselwa ukubuyisa umashi e-Prime Hook National Wildlife Refuge
Umsebenzi wePremier Hook Refuge ozoqala ngoJuni
Sebenzela ukubuyisa imishado e-Prime Hook National Wildlife Refuge kulindeleke ukuthi iqale ngoJuni 15, okuyisigaba sokuqala ngecebo lama- $ 38 million wokwakha isivunguvungu kanye nokwenyuka kwezinga lolwandle ku-federal ye-10,144-acre ebambe eDelaware Bay.
Isinyathelo sokuqala kuzoba ukukha amashaneli akhiwe ngokudonswa kwamanzi ayevumela imashi ukuthi ichithe. Lapho amanzi esebuyisiwe, kuzofakwa amapayipi esihlabathi ama-1.1 ayizigidi ezingama-uju ebhishi ngaseningizimu yomgwaqo uFowler Beach ukugcwalisa ukuvuleka okwenze noma kwaba kubi kakhulu ngesikhathi seSuper sefey Sandy.
Indunduma edaliwe izotshalwa ngotshani ukusiza ukuyiqinisa futhi ivumele indawo eseduze ukuba ilulame emashumini eminyaka wokukhohlisa kwabantu, kufaka phakathi iminyaka ye-25 lapho amazinga wezulu ancishiselwa khona futhi akhuliswa ukuze kuhlaliswe izingcingo zasendle.
Imashi, yize isondelene neDelaware Bay, yagcinwa yindawo enamanzi ahlanzekile. Lapho izivunguvungu zidabula izindunduma, zaguquka ngokushesha zaba imashi kasawoti futhi izitshalo zamanzi ahlanzekile zafa. Imashi izotshalwa ngezinhlobo ezibekezelela usawoti.
Le phrojekthi kulindeleke ukuthi ihlale iminyaka engama-30 noma ngabe ulwandle lukhuphuka ngamamitha angu-1.6 maphakathi nekhulu leminyaka njengoba kusikisela okunye, ”kusho u-Al Rizzo, umholi wephrojekthi yeCoastal Delaware National Wildlife Refuge Complex Bombay Hook National Wildlife Refuge nePrime Hook National.
Funda i-athikili ephelele ku: http://www.delawareonline.com/story/news/local/2015/06/03/prime-hook-refuge-work-start-june/28438141/